भ्रष्टैभ्रष्टले चलाएको देशमा सरकारले के गर्न सक्ला र ? : हरिवंश आचार्य
Thu, Feb 20, 2020 | 05:58:49 NST
Total Hits: 3.8 K
Posted: Saturday, Mar 24, 2018 11:13 AM (2years ago )
काठमाडाैं, चैत १० - हरिवंश आचार्य देशको विकृती विसंगतीविरुद्ध खबरदारी गर्ने कलाकार मात्र नभएर यस्तो होस् भनेर पहरेदारी गर्ने नागरिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ । मदनकृष्ण श्रेष्ठसँग मिलेर निर्माण गरेको महसञ्चारमार्फत उहाँहरुले हास्यब्यङ्ग्य मार्फत गलत काम गर्नेलाई सिस्नुपानी लगाउँदै आउनुभएको छ ।
नेपाली कला र कलाकार संख्यात्मक रुपमा बढेपनि गुणस्तरीयताको कसीमा अझै पछि नै रहेको उहाँको ठम्याइ छ । वर्षेनी १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र चलचित्रले आफ्नो लगानी उठाउन सक्नु यसकै एउटा प्रमाण हो भन्ने उहाँ मान्नुहुन्छ । कला क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी भित्रन नसकेका कारण यो क्षेत्रको गुणस्तर बढ्न नसकेको उहाँको भनाई छ ।
हरिबंश आचार्य नेपाली राजनीतिसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्न । देश विदेशीको इशारामा र भ्रष्टैभ्रष्टले चलाएको उहाँको आरोप छ ।
नयाँ सरकार बनेको छ, धेरै कुरा गर्छु भनेको छ, पत्याउन सकिन्छ ? उहाँको जवाफ छ– ‘विश्वास गर्न सकिने धेरै आधार छैनन् । विगत मात्र हेर्ने हो भने त यिनीहरुलाई कुट्न थालेपनि हुन्छ, तर सकारात्मक सोच्नुपर्यो । नयाँ सरकार बनेको छ यो गर्छु र त्यो गर्छु भनेको छ केही गर्ला कि त भनेर आशा गर्नैपर्यो ।’